दायाँ हात भाचिएको, बायाँ हातमा प्लास्टर : डाक्टरको लापरबाही - info4nepal
कालिकोट – जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा डाक्टरको चरम लापरबाही देखिएको छ। एक बालिकाको दायाँ हात प्लास्टर गर्नुपर्नेमा बायाँ हात प्लास्टर गरिएको छ।
साबिक राम्नाकोट–४ हाल पचालझरना गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी ४ वर्षीया दैनाकुमारी बमको बायाँ हात प्लास्टर गरिएको छ। डाक्टरले आकस्मिक कक्षमा लगेर चेकजाँच गर्दा दायाँ हात फ्याक्चर भएको पुष्टि भए पनि लापरबाहीले बायाँ हात प्लास्टर गरिएको छ।
बालिकाको उपचारमा संलग्न एमडिजिपी डाक्टर विज्ञान प्रजापति हुन्। उनले भने, ‘बिरामीका बुवाले नै बायाँ हात भनेकाले पलास्टर गरेको हुँ। चेकजाँच रिपोर्ट हेर्नेभन्दा पनि बिरामीका आफन्तले भनेको सुनेर काम गरें। तर फेरि बिरामीलाई बोलाएर दायाँ हात पलास्टर गरिसकेको छु।’
रबि लामिछानेले गरे- आफुलाई देशबाटै लखेट्ने खेल र सिधा कुरा जनतासँग बन्द गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास
न्युज २४ को चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासंगका संचालक रबि लामिछानेले एक स्ट्याटस पोस्ट गर्दै आफु माथि गम्भिर षड्यन्त्र भैरहेको खुलाएका छन् । जनताको चासो, गुनासो र जिज्ञासा सहितको कार्यक्रम मार्फत लाखौं नेपालीहरुको ढुकढकी बनिरहेका रबिले उक्त स्ट्याटस पोष्ट गरेपछि उनका समर्थक र शुभचिन्तकहरु चिन्तित बनेका छन् ।
वास्तवमा स्ट्याटसमा रबिले आफ्नो कार्यक्रम बन्द गर्ने र आफुलाई देशबाट लखेट्ने षड्यन्त्र भैरहेको खुलाशा गरेका छन् ।
रबिले लेखेका छन् – प्रश्नको सामना गर्न नसक्नेहरुको दाउपेच बारे छिट्टै मेरा अनुभवकोपनि खुलासा गर्दैछु। कार्यक्रम बन्द मात्र होइन देशबाटै लखेट्ने सम्मको खेलमा सम्लग्नहरुको एक एक हिसाब राखेको छु।
बर्गेनिङ गर्ने,मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने, अर्काको चरीत्र हत्या गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाएर आधा सन्सार घुम्ने, जिन्दगीभर अर्काको फ्री मा खाने मान्छे प्रेस काउन्सिलमा भए सम्म त्यसताले सिफारिस वा हस्ताक्षर गरेको प्रेस पास बोकेर सिंहदरबार छिर्नु छैन मलाई। मलाई ूपख्लासू भन्नू हुने पत्रकार महोदय, म अब धेरै कुर्न सक्दिन।
यसरी उनको स्ट्याटसलाई सयौंले सेयर गरेका छन् भने उनको पक्षमा आफु रहेको भन्दै धेरैले कमेन्ट गरेका छन् । रबि लामिछानेको यस्तो स्ट्याटसले सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रम माथि दबाब आईरहेको बुझ्न सकिन्छ । हेर्नुहोस, यसरी हुंदैछ रबि लामिछानेलाई दशेबाटै लखेट्ने र सिधा कुरा जनतासंग बन्द गर्ने षड्यन्त्र.
काङ्ग्रेसले देखायो आफ्नो पावर, कम्युनिस्टहरु तनाबमा
कोमल ओलिलाइ चिट्ठा पर्यो , हेर्नुहोस के पर्यो ?? अब के गर्छिन ओलिले?
किशोर श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिललाई व्यक्तिगत स्वार्थमा उभ्याए : सञ्चार-आबद्ध संस्थाहरू